Fanentanan’ireo Vehivavy Iraniana Mitaky Fanovàna Ireo Lalàna Manavakavaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 7:20 GMT
Manohy ny tolona ataon'izy ireo hisian'ny fitoviana zo, mihoatra lavitra ireo sakana ataon'ny fanjakana, ireo vehivavy Iraniana. Andro vitsivitsy lasa izay, nanomboka hetsika iray hanoherana ny fanavakavahana ny vondrona iray ahitàna vehivavy Iraniana mpikatroka tsy nitandro hasasarana, nampitondraina ny lohateny hoe ”Sonia Iray Tapitrisa Itakiana Fanovàna Ireo Lalàna Manavakavaka.”
Ity fihetsiketsehana ity dia notohanan'ireo olo-malaza toa an-dry Nasser Zaarafshan, mpanoratra ary mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, nahazo ny loka Nobel Fandriampahalemana Shirin Ebadi . Tonga ihany koa nanohana ny fanentanan'ireo vehivavy ny lehilahy Iraniana maro, hetsika izay nokendrena mba hanafoanana ireo lalàna manavakavaka ao Iràna. Nirian'ireo vehivavy Iraniana ny hanomboka ireo andro fanentanany voalohany tamin'ny fikarakarana seminera tao amin'ny Ivontoerana iray ho Fanasoavam-bahoaka, fa tsy nanome alàlana azy ireo ny fanjakana ary nanakatom-baravarana tamin'izy ireo. Blaogera Iraniana maro, vavy sy lahy, no teny amin'ity fivoriana ity ary nizara ny eritreriny, sary ary fihetseham-pony.
Arash Ashourinia, mpitoraka blaogy an-tsary sady mpanao gazety sangany, no nampiseho antsika ny zava-nitranga tamin'ny alalan'ny sary nalainy sy ny teniny. Asongadin'ny bilaoginy, Kosoof, ireo sary maro tamin'ity fivoriana ity, teny an'arabe ambadik'ireo varavarana nihidy, .
Milaza i Ashourinia fa tsy avelan'ireo manam-pahefana ny vehivavy ho tonga hiaraka ho any amin'ny Rad, Ivontoerana ho Fanasoavam-bahoaka. Ampian'ilay blaogera fa atombok'ireo mpikatroka ho an'ny zon'ny vehivavy Iraniàna ny hetsika fanentanana goavana iray hitakiana ny fampitsaharana ny fanavakavahana araka ny lalàna atao amin'ny vehivavy ao anatin'ny lalàna Iraniana:
Fanentanana, ”Sonia Iray Tapitrisa Itakiana Fanovàna Ireo Lalàna Manavakavaka,” izay mikendry ny hanangona sonia iray tapitrisa hitakiana ny fanovàna ireo lalàna manavakavaka ny vehivavy, dia ezaka fanarahamaso ny fihetsiketsehana am-pilaminana mitovy tanjona aminy izay nitranga tamin'ny 12 Jona 2006 tao amin'ny kianjan'i Haft-e Tir tao Tehran. Ny hetsika fanomanana ho fanohanana ity fanentanana ity dia nanomboka tamin'ny Jona 2006 ary ny 27 Aogositra no fanombohana amin'ny fomba ofisialy ilay fanentanana, mandritra ny seminera mitondra ny lohateny hoe: ”Ny Fiantraikan'ny lalàna Eo Amin'ny Fiainan'ny Vehivavy.”
Fa tsy hamela azy ireo hanao ny seminerany ireo manampahefana ary hilaza fa tokony haka fanomezandàlana avy amin'ny ministera izy ireo. Araka ilay lalàna ankehitriny ao Iràna, tsy mila fahazoandàlana ny fanaovana seminera & hetsika am-pilaminana.
Toa tsy nahakivy ireo mpandray anjara ny tsy fisian'ny toerana fivoriana, izay, araka ireo blaogera, nifangaro teny an-dalambe ary ny sasany tamin'ireo mpandahateny dia nifampiresaka tamin'ny vahoaka tonga nanatrika.
Manampy ny blaogera Soheil Asefi:
Voalaza fa nilaza azy ireo mazava tsara ny manampahefana fa ireo lalàna ireo dia avy amin'ny fivavahana silamo ary ny ankamaroan'ny firenena Silamo dia tsy misy manohitra azy ireo. Ny fanoherana azy ireo ao Iràna dia fanoherana ny finoana Silamo. Notoroana hevitra ireo vehivavy mpikatroka sasany nihaona tamin'ny manam-pahefana mba hijery vahaolana iray ao anatin'ny Korany.
Nanamarika ny fisian'ny olo-malaza toa an'i Shirin Ebadi ihany koa i Asefi ary nilaza fa tsy ara-dalàna ilay fanidiana ireo varavarana tsy ho an'ireo mpandray anjara [Fa].
Nilaza i Aroosak Kooki, tamin'ny fomba nanesoeso, fa any Iràna, tsy hoe ela dia hila fahazoandàlana na dia ny miaina fotsiny aza [Fa]. Nanamarika i Aroosak Kooki fa noho ny fandrahonana dia nohidian'ilay Ivontoerana ny varavarany tsy ho an'ireo mpikatroka, izay efa vonona ny handray sonia sy hanoratra ny anaran'ireo mpirotsaka an-tsitrapo. Noraisin’ i Aroosak Kooki izany ho toy ny mariky ny fahavononan'ireo mpikatroka hanohy sy handà ny ho kivy.
Milaza i Sooratak hoe lehilahy sy vehivavy 200 no efa nanao sonia ilay fanentanana ary hanohy izy ireo mandra-pahazoany ireo sonia iray tapitrisa ary mandra-panova ireo lalàna manavakavaka [Fa].
Manoratra i Tadai azad fa nisy zavatra tsara nitranga taminy tamin'io andro io, ary nahitany fa, mba ho olom-pirenena tsara ao Iràna, mila lasa jamba ianao [Fa]. Iràna, hoy i Tadai, dia firenena iray ahitànao ny varavarana rehetra mikatona ho anao amin'ny fotoana ilazànao ny marina.
Tanisain'i Harfayi Baraye Nagoftan ny fanambaràna nataon'i Nasser Zarafshan izay nilaza fa ity hetsika sy ireto hevitra ireto dia tokony hiàla avy amin'ny avo (manampahaizana) ary hankany amin'ny ambany (olontsotra), ary raha tsy mahita ny làlany mankany amin'ny vahoaka ity hetsika ity dia hitokozihitra fotsiny sy ho lasa tsy mahomby izy [Fa].